China ga egosiputa ihe di n’elu onwa n’ime 2018 | Akụkọ akụrụngwa
China ka mee ka ọha mara ihe niile ọ na-achọ maka afọ iri na-abịanụ, na, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ha agaghị ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị ebe ọ bụ na, dịka a nụworo ya, ọbịbịa nke Yutu robot na ọnwa na 2013, bụ naanị egbe mmalite maka ọrụ ọ dị ka ewerela ụzọ nkeonwe. Ihe omume ozo ha choro inweta bu Gosi ihe dị n’akụkụ nke ọnwa na 2018.
Iji mezuo nke a, ndị ọkà mmụta sayensị na ndị nchọpụta si China Space Agency na-arụ ọrụ na mmepe nke Chanje-4 satellite, nke, dika ha gosiworo, aghaghi ịdata na akuku di anya nke Onwa. Iji mezuo ebumnuche a, gwa gị nke ahụ China ga-abụ obodo izizi tinye ụgbọ mmiri a na-achịkwa n'akụkụ ọnwa. N'ịga n'ihu na mmemme ya pụrụ iche, anyị na-ahụkwa echiche nke inwe ike iru Mars.
China chọrọ inyocha akụkụ gbara ọchịchịrị nke ọnwa na 2018.
Kpọmkwem, ma dịka ndị gọọmentị China kwupụtara, o doro anya na n'ime afọ ise na-esote, ha na-ezube ịmalite ozi ala. A ga-arụ ọrụ a na 2020 na ebumnuche ya abụghị naanị ịnakọta nnwale sitere na mbara ụwa maka nyocha na-esote na ụwa. N'iji ohere nke njem ya gaa Mars, dị ka a kọrọ, ụlọ ọrụ ahụ ga-erite uru ịchọpụta gburugburu Jupita ebumnuche nke ime nyocha dị iche iche na ajụjụ dịka mmalite na mmalite nke sistemu anyanwụ.
Ozi ndi ozo: Associated Press
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » China ga egosiputa ihe di n’elu onwa n’ime 2018
Apple iji malite iPhone 7 nwere ihuenyo 5-anụ ọhịa